Farmaajo iyo CC Warsame midkee saxan? | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo iyo CC Warsame midkee saxan?
Soomaaliya waxa ay u baahan tahay in hoggaamiyaashu mar kasta la hadlaan bulshada, si loo ogaado hal-doorka hoggaanka dalka lagu aamini karo, ee fahmadda u saaxiibka ah.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynihii muddadu ka dhamaatay ee Somaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo ka qeyb galayay munaasabad lagu xusayay lixdan iyo kow guuradii ka soo wareegtay markii saan-caddaalihii gumeysiga la iska dulqaaday, ayaa sheegay in labo figradood ay dalka isku hayaan, kuwaas oo kala ah, “Waddaniyad iyo Qabyaalad.
Isaga oo micneynaya halka uu salka ku hayo dhibka Soomaaliya muddada ka taagnaa wuxuu sheegay, in qabyaaddu tahay curadka caqabadda, ayna ka soo hor jeeddo afkaarta “Waddaniyad”, hayeeshee dad badan ayaa layaaab u arkay hadalka Farmaajo, waxayna tilmaameen in wax fahan ah uusan ka heysan dhibaatada Soomaaliya margiyada jartay.
“Ma jiro qof qabyaad awgeed u hor is taagaya hormarka Soomaaliya, qiica qabyaaladda waxbaa kiciya, waaxaana ka mid ah in waddanka qof, koox ama qabiil gooni ah is xigsiiyaan, dad gaar ahna qaran dumis lagu tilmaamo iyadoo kuwa kale waddaniyiin lagu suntayo”. Ayuu yiri bare wax ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha Muqdisho ku yaalla.
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ayaa ka mid ah dadka ka falceliyay hadalka Farmaajo, wuxuuna sheegay in afkaarta dalka ragaadiyay ay yihiin labo aragti oo kala ah “Kaligii Islaam iyo kaligii Waddani”
“Dalkeenna laba fikradood oo xagjir ah ayaa ragaadiyey. Kaligii Islaam iyo kaligii Waddani. Labadduba Diintii iyo Dalkiiba magaca ayey ka dileen. Diintu waa caqiidadeenna, dakuna waa deegaankeenna cid aan magacooda nagu dulmin ee inna wada deeqsiisa, deriskana nabad kula noolaata, dunidana la jaanqaadda ayey shacabku doonayaan”.
Warsame, wuxuu ku dooday in labada figradba yihiin xag-jir, isla-markaana kuwa kaligood Islaamka ah ay dadka diinta ka saaraan si ay dhiiggooda u banneystaan, halka kuwa kaligood waddinaga ahna ay dadka kale wadanka ka xigsadaan si u sumcad dilaan, haddii ay doonanna natooda iyo maalkooda u banneystaan.
Xilligaan la joogo waxaa la isku raacsan yahay in Al-Shabaab ay kaalin weyn uga jiraan dhibaabooyinka Soomaaliya ka aloosan, qabyaalad iyo waddaniyad midna ku duufsadaan dadka ku biiraya ama ka midka ah ee kaligiid Islaamnino ayay ku soo xero galyaan, Farmaajo midda waa u muuqan weysay.
Taasi wax ay ka dhigan tahay in dalka uu majaraha u hayay afartii sano ee la soo dhaafay Madaxweyne aan masalaxada umaddu u muuqan, kana arradan fahamka mushkiladda muddada taagan.